Vaovao - Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny fanapahana hafanana mandritra ny fanaovana kitapo
Fanaraha-maso ny hafanana amin'ny fanapahana hafanana mandritra ny fanaovana kitapo
Amin'ny dingan'ny fanaovana kitapo dia indraindray tsy dia tsara loatra ilay famehezana kitapo. Ireo vokatra novokarina tamin'ity fomba ity dia tsy mendrika. Inona no mahatonga an'io trangan-javatra io? Tokony hitandrina ny mari-pana amin'ny fanapahana hafanana isika
Fanafarana ny fifehezana ny hafanan'ny cutter mandritra ny fanaovana kitapo, raha tsy mety ny mari-pana dia tsy ho mendrika ny kitapo vita.
Voalohany, alao antoka fa inona ny fitaovana ampiasainay. Same materialy hafa hateviny samy hafa sakany samy hafa halavana, mila hafanana hafa. Misedra kitapo maromaro amin'ny fiandohan'ny milina mihazakazaka hahitana mari-pana mety
Faharoa, mila hafanana samihafa ny fitaovana samihafa.
Ny maripana fanapahana dia manapa-kevitra ny kalitaon'ny kitapo, raha avo loatra ny mari-pana, ho levona ny fitaovana, tsy ho fisaka ary ho adhesive ny fitaovana, avy eo ho kitapo fako, raha ambany loatra ny maripana dia tsy afaka manapaka kitapo tanteraka izy io ary hiditra ny kitapo manaraka.
Ary koa, rehefa mandeha haingana ny hafainganam-pandehan'ny milina, mila miakatra ihany koa ny mari-pana, rehefa midina ny hafainganana dia mila midina mifanaraka amin'izany koa ny mari-pana
Mila manadio ny mpanapaka hafanana matetika isika aorian'ny famonoana ny masinina, rehefa avy nihazakazaka nandritra ny fotoana ela dia hanana vovoka amin'ny fanapahana izy io, raha tsy manadio azy isika dia mety hamindra amin'ny kitapo ny vovoka.
Ary koa, mila manamarina ny toeran'ny mpanapaka isika, aorian'ny fandefasana hafanana maharitra elaela, tsy maintsy solointsika vaovao izy io, aorian'ny fampiasan'ny cutter mandritra ny fotoana fohy, tsy dia maranitra izany.
Ka raha afaka mifehy tsara ny hafanan'ny fanapahana hafanana isika mandritra ny fanaovana kitapo, dia afaka mampitombo ny fahafaha-mamokatra, mampihena ny fako kitapo, amin'izay isika afaka mampihena ny vidiny.